Mankalaza zava-dehibe ny Sandaly Resorts miaraka amin'ny fampiasam-bola vaovao any Karaiba
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Mankalaza zava-dehibe ny Sandaly Resorts miaraka amin'ny fampiasam-bola vaovao any Karaiba
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • fanabeazana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Sandals Resorts International (SRI) dia nanambara ny faha-40 taonan'ny marika voalohany ho an'ny mpivady, Sandals Resorts ihany. Hatramin'ny nanokafany ny varavarany tao Montego Bay tamin'ny 27 Novambra 1981, ny Sandals Resorts dia nahafaly ny vahiny, niara-niasa tamin'ny mpanolotsaina momba ny dia, ary nanampy tamin'ny fananganana fizahan-tany manerana an'i Karaiba, izay nanolo-tena hampivelatra ny fahaiza-mandray vahiny manerana ny faritra, iray amin'ireo malala indrindra ary toeran-kafa fizahan-tany mahomby eto amin'izao tontolo izao.
Ny orinasan-trano fandraisam-bahiny dia mankalaza 40 taona ny fandraisana vahiny feno.
Izy io dia fahatsiarovana ny lova navelan'ny mpanorina azy, Gordon "Butch" Stewart, izay nodimandry ary nametraka ny fototra ho an'ny ho avy.
Sandals Resorts dia nanambara ny Sekolin'ny fandraisam-bahiny vaovao, tetik'asa fizahan-tany fiarahamonina 40 any Karaiba, fety manerana ny toeram-pialan-tsasatra sy maro hafa.
Ny orinasan-trano fandraisam-bahiny miharo volo rehetra dia mankalaza ny tsingerintaonan'ny Sandals tamin'ny alàlan'ny fanomezam-boninahitra ny lova naorin'ny mpanorina azy, ny nodimandry Gordon 'Butch' Stewart, izay manazava ny fiantraikan'ny fizahan-tany amin'ireo vondrom-piarahamonina Karaiba any an-toerana, mamerina ny famantaranandro miaraka amin'ny drafitra mahafinaritra nostalgia. manerana ny trano fandraisam-bahiny misy an'i Sandal rehetra, ary hitohy amin'ny fahagagana fanampiny haseho mandritra ny taona.
"Ity taona ity dia manamarika dingana lehibe tsy mampino ho an'ny Sandals Resorts, ary misy dikany manokana indrindra izany satria manararaotra ity fotoana ity izahay hanomezam-boninahitra ny zavatra noforonin'ny raiko sy hitondra ny lovany hajaina manerana ny Karaiba," hoy ny filohan'ny Executive SRI, Adam Stewart. “Hatramin'ny nanokafana ny sainam-pirenena tamin'ny 1981 tamin'ny Sandal Montego Bay, nanohy nanandratra sy nitondra ny efitrano fialan-tsasatra rehetra izahay. Ankoatr'izay, nasehonay fa ny fanavaozana ny fandraisana vahiny mampientanentana indrindra sy maharitra dia noforonina tany Karaiba. Faly aho fa mankalaza ity dingana lehibe ity ho an'ny orinasanay miaraka amin'ny fianakavianay Sandals rehefa mijery ny 40 taona manaraka aingam-panahy sy fahitana any Karaiba. "
Ho fankalazana ny faha-40 taonany, i Sandals Resorts dia sahy nilaza fa:
Ny Sekolin'i Gordon "Butch" Stewart Iraisam-pirenena momba ny fandraisam-bahiny sy fizahan-tany
Ho fanomezam-boninahitra an'i Gordon "Butch" Stewart, mpanorina an'i Sandals, sy ny toe-tsain'ny mpandraharaha malaza ary ny finoany mandritra ny androm-piainany, ny Sandals Resorts International dia nanambara ny fananganana ny Gordon "Butch" Stewart International School of Hospitality and Tourism ao amin'ny University of the West Indies (The UWI) ary miaraka amin'ny Sekolin'ny fampiantranoana sy fizahan-tany Chaplin University International (FIU) Chaplin. Ireo mpitarika roa amin'ny fanabeazana fizahan-tany, FIU miaraka amin'ny The UWI, dia hampivelatra ny taranaka manaraka ho an'ny fizahan-tany iraisam-pirenena sy ny fahaiza-mandray vahiny, amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana nahazo diplaoma feno sy nahazo diplaoma. Ny sekoly vaovao dia ho hita ao amin'ny Campus Andrefana an'ny The University of the West Indies, Mona ao amin'ny renivohitr'i Montego Bay any Karaiba.
Fotodrafitrasa marindrano sy notarihin'ny fikarohana, ny Gordon "Butch" Stewart International School of Hospitality and fizahan-tany dia hanome mpianatra tombony ho an'ny fampianarana any an-dafin'ny efitrano fianarana. "Ny raiko dia nino ny fianarana tamin'ny traikefa - 'fiofanana momba ny asa', araka ny filazany matetika," hoy i Stewart. "Amin'ny maha mpandraharaha azy tanteraka sy mpanonofy mandritra ny androm-piainany dia fantany fa teraka ankoatra ny efitrano fivoriana ny fahombiazana; Hita fa tsy amin'ny fotoana fikarohana sy fikarohana. Ity fiara ity no hanomezana aingam-panahy ny fandaharam-pianarana kilasy eran'izao tontolo izao, hametraka ny mpianatra amin'ny traikefa an-toerana ho ampahany amin'ny fivoarany. ”
Ny fampiasam-bola amin'ny fanabeazana dia efa laharam-pahamehana ho an'ny SRI, ary ny sekoly vaovao dia hameno ny Sandals Corporate University, izay natsangana hanomezana fahafaham-po ireo mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals monina any Karaiba hanatsara sy hampivelatra ny fahaiza-miasa ary hahazo mari-pahaizana licence sy diplaoma. "Rehefa mampiasa vola amin'ny vahoaka Karaiba isika dia mampiasa vola amin'ny ho avin'ny faritra," hoy i Stewart.
40 ho an'ny hetsika 40: Tetikasa mahasoa ny vondrom-piarahamonina Karaiba
Na dia tsy fehezan-teny natsangana aza i Sandals efa-polo taona lasa izay, ny fanahin'ny andraikitra ara-tsosialy (CSR) dia anisan'ny rafitry ny orinasa hatramin'ny nananganana azy. "Tsy azo lavina ny fifandraisana misy eo amin'ny fizahan-tany sy ny fiadanan'ny fiarahamonina Caribbean any an-toerana izay iasantsika," hoy i Adam Stewart. Ho fanomezam-boninahitra ny 40 an'ny orinasath tsingerintaona, Sandals Resorts International, miaraka amin'ny Fondation Sandals, ilay fikambanana tsy mitady tombom-barotra natomboka tamin'ny taona 2009 mba hanampiana ny SRI hanisy fiovana eo amin'ny fiainan'ny olona Karaiba, dia mamantatra ireo tetikasa efapolo izay mampiseho tsara ny fifandraisana mampitolagaga eo amin'ny fizahan-tany - ny indostria manana ny toerany manana ny fahefana indrindra ao amin'ny faritra - sy ny heriny hanovana ireo vondrom-piarahamonina Karaiba ary manatsara ny fiainana.
Hisafidy ireo tetikasa manerana ny faritra dimy lehibe: ny fanohanana ny tantsaha eo an-toerana, ny fampiofanana sy ny fandraisana an-tanana ny fandraisana an-tanana, ny fitehirizana ny harena voajanahary, ny fampiasana asa tanana miavaka sy ny fanentanana ny vondrom-piarahamonina. Manomboka amin'ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny tranokalan'ny UNESCO Heritage ao amin'ny Blue and John Crow Mountains ao Jamaika ary manatsara ny fahafahan'ny tantsaha mampitombo ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny famokarana sakafo maharitra, ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanao asa tanana ao an-toerana mba hampitomboana ny talentany, dia hirodana ireo mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals manainga ny tanany mba hamelona ireo tetikasa ireo ary manasa ny vahiny hiditra ao.
Amin'ny Fotoanan'ny Nosy hatrany - Mampahafantatra ny Sandals PalmCast
Sandals Resorts dia manomboka ny resaka ary mitazona an'i Karaiba ho lohalaharana amin'ny podcast voalohany indrindra, "Sandals PalmCast", manome ny mpihaino ny sanganasa anatiny momba ny zava-niseho farany rehetra manerana ireo resort miaraka amina fizarana 13 ka hatramin'ny 20 minitra ahitana fahitana ny manam-pahaizana, topy maso ny resor, ary resadresaka manokana misy tsy ampoizina eny an-dalana. Miaraka amin'ny salan'isa averimberin'ny mpitsidika efa ho 50%, ny vahinin'ireo Sandals dia tsy mivadika sy mazoto mianatra momba ny zava-nitranga farany teny amin'ny toeram-pialofana sy manerana an'i Karaiba avy amin'ny Sandals Resorts, ambasadaoro marika Karaiba.
Eo an-toerana, ny vahiny dia afaka mandray anjara amin'ny fankalazana ao amin'ny Sandals Resorts rehetra miaraka amin'ny fandohalehana amin'ny nostalgia, ao anatin'izany:
Manomboka amin'ny OG ka hatramin'ny mahazatra - Avy eo & Ankehitriny Cocktails manokana & Serivisy amoron-drano vaovao
Amin'ny maha-mpamorona bara fitondra milomano azy, i Sandals dia mahafantatra zavatra iray na roa momba ny fandatsahana ireo cocktaide farihy tsara. Mankalaza ny marika amin'ny alàlan'ny famoronana olon-tiana vaovao ary famerenana ny tena izy. Ny mpitsidika dia afaka mandray tsipika fahatsiarovana eo am-pitadiavana ny latabatra kokila 1981/2021 mifanila eo amin'ny tsiro nefa tsy mila mampiasa milina fotoana hahatongavana any. Ny Sandals Resorts rehetra dia hanomboka ihany koa ny serivisy amoron-drano vaovao manolotra sakafo mahavariana sy sakafo an-tsokosoko vita amin'ny sakafo Karaiba mba hahafahan'ny vahiny mijanona eo akaikin'ny dobo filomanosana lava kokoa. Ho fanampin'izany, ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana manerana ny marika dia hanomboka fanandramana zava-pisotro cocktail vaovao namboarina tamin'ny tanana nahitana cocktail vaovao miisa valo mifangaro amin'ny fangaro tsiro miavaka, zava-pisotro misy alikaola, akora vaovao, ary anana raisin-tanana avy amin'ny toeram-piompiana eo an-toerana.
Hetsika famerenana kapa amin'ny sandaly
Ny vahinin-kiraro dia afaka manao fety toy ny tamin'ny 1981 niaraka tamin'ny fankalazana manokana ny kamory teny amoron-drano ho fahatsiarovana ny fahafinaretana 40 taona. Ny vahiny dia afaka mamono ny masoandro raha ny lasa kosa dia mamaly ny ho avy atolotry ny DJ live mivezivezy mozika aingam-panahy sy mpanao bartender manolotra cocktails asa tanana mahazatra.
Trano fivarotana antitra any amin'ny Beach House Resort Shops
Sandals Resorts dia mandefa EST. T-shirt antitra sy fanangonana antsinjarany nahazo aingam-panahy tamin'ny 1981, no hita ao amin'ny fivarotana amoron-dranomasina rehetra any Beach House. Ny vahiny dia afaka misafidy endrika XNUMX nostalgia sy mivelatra izay manome voninahitra ny fomba fananganana Sandals, azo vidiana manomboka ny volana novambra.
Ankoatry ny drafitra eo an-toerana, ireo mpikarama an'ala Sandals Select Rewards ary mpiara-miombon'antoka mpanolotsaina manam-pahaizana manokana momba ny kiraro efa hatry ny ela dia hoentina amin'ny sakafo hariva ho an'ireo vahiny miverina ary mety hasaina koa hanatevin-daharana tsangambato fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-40 an'ny Lady Sandals, Sandals Resorts 'yacht sonia izay amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo fankalazana manamorona ny morontsiraka atsinanana mandritra ny taona.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fankalazan'ny Sandals Resorts ny faha-40 taonany ary hijanona ho vaovao miaraka amin'ny tsy ampoizina fanampiny, alao antoka fa hitsidika eto ianao.
Famandrihana fijanonana ao amin'ny Sandals Resorts, visit here.
Sandals® Resorts dia manolotra olona roa amin'ny fitiavana ny traikefa fialan-tsasatra indrindra, Luxury Included® any Karaiba manerana ny toerana amoron-dranomasina 15 mahavariana ao Jamaika, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, ary ny toerana vaovao faha-16 tonga tany Curacao Aprily 2022 .Mankalaza ny 40 taona, ny orinasan-trano fandraisam-bahiny malaza rehetra dia manome fampidirana kalitao betsaka noho ny hafa rehetra eto ambonin'ny planeta. Ny Sandals Resorts dia misy ny sonia Love Nest Butler Suites® ho an'ny tsiambaratelo sy serivisy farany; mpivaro-kena nampiofanin'ny Guild of Butlers English Professional; ny Red Lane Spa®; Misakafo 5-Star Global Gourmet ™, miantoka alika toaka ambony, divay misy vidiny ary trano fisakafoanana manokana ho an'ny gourmet; Aqua Centres misy fanamarinana sy fanofanana PADI® manam-pahaizana; Wi-Fi haingana avy amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny efitrano fatorianao ary ny fampakaram-bady ho an'ny Customizable Sandals. Sandals Resorts dia miantoka fiadan-tsaina ho an'ny vahiny manomboka amin'ny fahatongavana ka hatramin'ny fiaingana miaraka amin'ny Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana, ny fepetra fanatsarana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny orinasa natao hanomezana toky ny vahiny rehefa miala sasatra any Karaiba ary koa ny Sandals Vacation Assurance vaovao, programa fiarovana feno fialan-tsasatra misy fiantohana voalohany-indostrialy ny fialan-tsasatra fanoloana maimaimpoana ao anatin'izany ny zotram-piaramanidina ho an'ireo vahiny voakitika tamin'ny fanelingelenana momba ny dia nataon'ny COVID-19. Sandals Resorts dia ao anatin'ny Sandals Resorts International (SRI) an'ny fianakaviana, natsangan'i Gordon "Butch" Stewart, nodimandry, izay ahitàna ireo Beach amoron-dranomasina miorina amin'ny fianakaviana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana Sandals Resorts Luxury Included®, mitsidika kapa.com.